Umehluko phakathi koMthetho weNkqubo kunye noMgaqo
Ukusebenzisana Ukunikela Ubulungiswa Ngoxa Ukhusela Amalungelo Abantu
Umthetho wenkqubo kunye nomthetho obandakanyekayo yimiba emibini yomgaqo-siseko kwinkqubo yamatyala emibini yase-US . Umthetho weenkqubo uchaza imigaqo apho inkundla ziva khona kwaye zigqibe umphumo wazo zonke iinkqubo zolwaphulo-mthetho, zombutho kunye nolawulo oluziswa phambi kwenkundla. Injongo yomthetho wenkqubo kukukhusela amalungelo abo bonke abantu abathatha inxaxheba kwinkqubo yenkundla. Ngokwenene, umgaqo wenkqubo - umatshini weenkundla - uhlose ukuqinisekisa ukuba iinkqubo zomgaqo-siseko weNkqubo yokuLawulwa koMthetho zilandelwa.
Umthetho osisiseko - ngokoqobo "inkunkuma" yomthetho-lawula indlela abantu abalindeleke ukuba baziphathe ngayo ngokwemimiselo yoluntu. Ngokomzekelo, iMithetho Eyishumi, umzekelo, imigaqo yemigaqo eqingqiweyo. Namhlanje, umthetho oqingqiweyo uchaza amalungelo kunye neemfanelo kuzo zonke iinkqubo zenkundla. Kwiimeko zobugebengu, umthetho oqingqiweyo ulawula indlela isohlwayo okanye ukungabi namacala okumiselwa ngayo, kunye nendlela iintyala zihlawulwa ngayo kwaye zijeziswe.
Ngokwenene, imithetho yenkqubo inokulawula indlela inkqubo enkundleni ejongene nokuthotyelwa kwemithetho ebalulekileyo eyenziwa ngayo. Ekubeni into ephambili kuyo yonke inkqubo yenkundla kukuqinisekisa inyaniso ngokubhekiselele kubungqina obukhoyo, imithetho yemigaqo yobungqina ilawula ukuthotyelwa kobungqina kunye nokunikezelwa kunye nobungqina bamangqina. Ngokomzekelo, xa abagwebi bexhasa okanye baqhekeza izikhalazo eziphakanyiswe ngabagwebi, benza njalo ngokwemithetho yenkqubo.
Indlela uMthetho weNkqubo kunye neNgcaciso yeMithetho ukukhusela amaLungelo akho
Nangona zombini umgaqo-nkqubo kunye nomthetho ongenamalungelo ungatshintshwa ngokuhamba kwesikhathi kwiNkundla ePhakamileyo kunye nokuchazwa komgaqo-siseko, ngamnye udlala indima eyahlukileyo kodwa ebalulekileyo ekukhuseleni amalungelo abantu ngabanye kwinkqubo yobulungisa bezobugebengu baseMelika.
Ukusetyenziswa kweNkqubo yoLwaphulo-mthetho
Nangona i-state nganye ithathe imigaqo yayo yenkqubo, ngokuqhelekileyo kuthiwa yi "Code of Procedure Procedure", iinkqubo ezisisiseko ezilandelwayo ezininzi zibandakanya:
Ukubanjwa konke kufuneka kusekelwe kwisizathu esinokwenzeka ;
Abatshutshisi bafake iifayili ezimele zichaze ngokucacileyo ukuba yintoni na ulwaphulo-mthetho osolwa ngalo mntu;
Umntu otshutshiswayo ulungiswa phambi kwejaji kwaye anikwe ithuba lokungena kwisicelo-isityholo sesono okanye ukungabi namacala;
Ijaji ibuza ummangalelwa ukuba afuna ummeli oqeshwe yinkundla okanye uya kunika igqwetha lakhe;
Ijaji iya kunika okanye ikhanyele ibheyili okanye ibhondi kwaye ityathe imali ehlawulwe;
Isaziso esisemthethweni sokuvela enkundleni sinikwe kummangalelwa;
Ukuba umtyholwa kunye nabatshutshisi abakwazi ukufikelela kwisivumelwano sokubambisana , iintsuku zovavanyo zibekwe;
Ukuba umntu otshutshiswayo unetyala enkundleni, umgwebi ubacebisa ngamalungelo abo okubhena ;
Kwimeko yeentetho zecala, ityala liya kwisigaba sokugweba .
Kwiinkoliso ezininzi, imithetho efanayo echaza amacala olwaphulo-mthetho iphinda isetyenziswe isigwebo esiphezulu esinokumiselwa, kwiintlawulo ukuya kwixesha eligcinwe entolongweni. Nangona kunjalo, inkundla yombuso kunye neyesigqeba ilandela imithetho eyahlukileyo yemigaqo yokugweba.
Isigwebo kwiiNkundla zeeNkundla
Imithetho yenkqubo yezinye iinjongo zibonelela ngenkqubo yesilingo okanye inxalenye yesibini, apho isigwebo senziwa kwelinye icala eligcinwe emva kokugwetywa kwetyala. Icandelo lesigwebo sokugweba silandela imigaqo efana neyomgaqo-nkqubo njengecala lesecala okanye elingabamsulwa, kunye nobufakazi obunjalo bokuvalelwa kunye neentetho.
Ijaji iya kucebisa ijaji yoluhlu lobunzima beemvakalisi ezinokumiselwa phantsi komthetho kaRhulumente.
Isigwebo kwiiNkundla zaseburhulumenteni
Kwiinkantolo zombuso, abagwebi ngokwabo babeka isigwebo esekelwe kwisicwangciso esincinci somgaqo-myalelo wesigwebo. Ekuqaliseni isivakalisi esifanelekileyo "ijaji, kunokuba i-jury, iya kuqwalasela ingxelo kwingxelo yolwaphulo-mthetho yommangali olungiselelwe ligosa lokulinganisa, kunye nobungqina obunikwe ngexesha lovavanyo. Kwiinkantolo zenkundla zomthetho, abagwebi basebenzise inkqubo yenkcazo ngokusekelwe kumgwebo wokumangalelwa ngaphambili, ukuba kukho na, ekusebenziseni izikhokelo zokugweba. Ukongezelela, abagwebi abasemagunyeni abanalo indlela yokubeka izigwebo ezingaphantsi okanye ezincinci kunezo zivunyelwe phantsi kwezikhokelo zomgwebo.
Imithombo yeMithetho yeMigaqo
Umthetho wenkqubo uqaliswa ngumlawuli ngamnye. Bobabini iinkundla zombuso kunye neentlangano ziye zakha iisethi zeenkqubo zazo. Ukongezelela, inkundla kunye neenkundla zikamasipala zinakho iinkqubo ezithile ezimele zilandelwe. Ezi nkqubo ziquka ukuba amacala afakwe njani enkundleni, ukuba amaqela achaphazelekayo ayaziswa njani kunye nendlela iirekhodi ezisemthethweni zenkqubo zenziwa ngayo inkundla.
Kwiinkoliso ezininzi, imithetho yenkqubo ifunyenwe kwimpapasho efana ne "Imigaqo yoLuntu," kunye ne "Imithetho yeNkundla." Imithetho yenkqubo yenkundla ye-federal inokufumaneka kwi-"Federal Rules of Civil Procedure".
IziNto eziSiseko zeMithetho yoLwaphulo-mthetho oluPhambili
Xa kuthelekiswa nomthetho wezobugebengu, umthetho wesigqeba osisiseko uquka "inkunkuma" yeetyala ezifakwe kubantu abachasene. Yonke into ehlawulwayo yenziwe ngamacandelo, okanye izenzo ezithile ezifunekayo ukufikelela kwinkohlakalo yolwaphulo-mthetho. Umthetho osisiseko ufuna ukuba abatyhutshisi baveze ngaphaya kokungathandabuzeki ukuba zonke iinkalo zolwaphulo-mthetho zenzeke njengoko zihlawuliswe ukwenzela ukuba umntu otshutshiswayo athotyelwe lolwaphulo-mthetho. Ngokomzekelo, ukukhusela isigwebo ngenxa yecala lokuqhuba umqhubi ngexesha lokuxiliswa, abashushisi kufuneka banikezele ezi zinto zilandelayo:
Umntu otyholwayo, ngokwenene, ngumntu oqhuba isithuthi;
Isithuthi sasiqhutyelwa kwindlela kawonkewonke;
Umntu otyholwayo wagxothwa ngokomthetho ngelixa eqhuba isithuthi; kwaye
Umntu otyholwayo wayenecala lokuqhubela phambili xa eqhuba.
Eminye imimiselo yomgaqo-nkqubo ehambelana nomzekelo ungentla iquka:
Umlinganiselo ophezulu uvunyelwe ipesenti yolwaphulo kwigazi lomntu otyholwayo ngexesha lokubanjwa; kwaye
Inani leenkolelo zangaphambili zokuqhuba xa utywala.
Kungenxa yokuba imithetho yomgaqo-nkqubo kunye neyomgaqo-siseko iyahlukahluka ngurhulumente kwaye ngamanye amaxesha ngamanxweme, abantu abahlawulwa ngokubhekiselele kulwaphulo-mthetho mabajongane nommeli wezobugebengu oqinisekisiweyo osebenza kwigunya lawo.
Imithombo yoMthetho oPhambili
EUnited States, umthetho obandakanyekayo uvela kumabhunga omthetho kaRhulumente kunye noMthetho kaMasipala oqhelekileyo ngokusekelwe kumasiko asekuhlaleni kunye nokunyanzeliswa yinkundla. Ngokomlando, uMthetho oqhelekileyo wenziwe ngumgaqo wemimiselo kunye nomthetho wecala olawula iNgilani kunye nama- coloni yaseMerika ngaphambi kokuba i-American Revolution. Ngexesha le-20 leminyaka, imithetho emiselweyo yatshintsha kwaye yanda ngokukhawuleza njengoko iCongress kunye nee-legislatures zombuso zanyusa ukuba zidibanise kwaye zihlaziye imigaqo emininzi yomthetho oqhelekileyo. Ngokomzekelo, ukususela kumyalelo walo ngo-1952, i-Uniform Code Code (UCC), ukulawula ukuthengiselana kweentengiso kuye kwamukelwa ngokupheleleyo okanye kwincinci yiyo yonke i-US ithi ishintshe uMthetho oqhelekileyo kunye nemithetho yelizwe eyahlukileyo njengomthombo oyedwa onamandla olawulo lomthetho.
20 IiKholeji ezinkulu zeKholeji
Ziphi na ezinye izinto?
Iilwimi zaseYurophu zasePaleolithic - Inja zasekhaya zaseYurophu?
UDemeter - Ngabazalwana Bakhe Bathengiswa